Caruurtii Wariye Jamaal Khashoggi oo lasiiyey Guryo iyo.. – Kismaayo24 News Agency
by admin 3rd April 2019 011
Sida uu qoray wargeyska Washington Post, Dowladda Sacuudiga ayaa caruurta suxufigii la dilay ee Jamal Khaashuqji siisay guryo ku fadhiya malaayin dollar, islamarkaana bil walba u qortay kumanaan dollar.
Khashoqji oo cambaareyn jiray dowladda Sacuudiga isla markaana wax ku qori jiray Washington Post, ayaa bishii October ee 2018 lagu dhex dilay kadibna meydkiisa lagu jarjaray gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
Dhaxal-sugaha awoodda badan ee Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan ayaa lagu eedeeyey inuu amray dilka Khashoqji, inkastoo uu dafiray.
War Cusub: Dowlada Kenya Maxay ka tiri Weerarkii lagu qaaday Saldhigooda Kulbiyoow Mise jirtaa in ay qirtay Qasaaraha la gaarsiiyay Ciidankooda??
Xogtii ugu dambeysay: Maxaa ka jira in ra’isul wasaare kheyre uu maanta ku dhawaaqi doono golahiisa wasiirada xili mudaduu uu farmaajo qabtay ay ku ekeyd…..